Anyị na onye ahịa na-arụkọ ọrụ ugbu a nke nwere azụmahịa ọhụrụ, akara ọhụrụ, ngalaba ọhụrụ, yana webụsaịtị ecommerce ọhụrụ na ụlọ ọrụ asọmpi dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị ghọtara otú ndị na-azụ ahịa na ndị na-achọ ihe si arụ ọrụ, ị ghọtara na nke a abụghị ugwu dị mfe ịrị elu. Ụdị na ngalaba nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke ikike na ụfọdụ Keywords na-enwe oge dị mfe karị idowe na ọbụna na-eto eto ha organic ogo. Ịghọta SEO na 2022 Otu
Akụkọ Weebụ Google: Ntuziaka bara uru iji nye ahụmịhe imikpu nke ọma
Fraịde, Machị 25, 2022 Fraịde, Machị 25, 2022 Sabrina Sedicot
N'oge a, anyị dị ka ndị na-azụ ahịa chọrọ ịgbari ọdịnaya ngwa ngwa o kwere mee yana ọkachamma na obere mbọ. Ọ bụ ya mere Google ji webatara ụdị ọdịnaya nke ha dị mkpụmkpụ akpọrọ Google Web Stories. Mana kedu ihe bụ akụkọ webụ Google na kedu ka ha si enye aka na ahụmịhe na-emikpu karịa na nke ahaziri iche? Kedu ihe kpatara iji akụkọ webụ Google wee kedu ka ị ga-esi mepụta nke gị? Ntuziaka a bara uru ga-enyere gị aka ịghọta nke ọma
Tọzdee, Machị 24, 2022 Tọzdee, Machị 24, 2022 Douglas Karr
Ruo ihe karịrị afọ iri, Google na-alụ ọgụ megide akụkọ ifo nke ntaramahụhụ ọdịnaya abụọ ahụ. Ebe ọ bụ na m ka na-aga n’ihu ịza ajụjụ na ya, echere m na ọ ga-aba uru ikwurita okwu ebe a. Nke mbu, ka anyi tulee ububo a: Gini bu Ojuju Ojuju? Ihe oyuyo ndi ozo na-ezo aka na otutu ihe di n'ime ma obu gafee ngalaba nke zuru oke ya na ọdịnaya ndi ozo ma obu nke yiri ya. Ọtụtụ n'ime ha, nke a abụghị aghụghọ n'aka. Google, Zere Oyiri
You maara na ibe gị nwere ike inwe ọtụtụ aha dabere na ebe ịchọrọ ka egosipụta ha? Ọ bụ eziokwu… ebe a bụ aha anọ dị iche iche ị nwere ike ịnwe maka otu ibe na sistemụ njikwa ọdịnaya gị. Aha Mkpado - HTML nke egosiri na ihe nchọgharị gị ma depụta ya ma gosipụta na nsonaazụ ọchụchọ. Peeji Peeji - aha ị nyere peeji gị na sistemụ njikwa ọdịnaya ịchọta ya